एसियाकै धनी मुकेश अम्बानीले आफ्नो बुहारीलाई दिए सुनको कार उपहार ! मुल्य सुनेर होस उडनेछ – ताजा समाचार
एसियाकै धनी मुकेश अम्बानीले आफ्नो बुहारीलाई दिए सुनको कार उपहार ! मुल्य सुनेर होस उडनेछ
एजेन्सी । रिलायन्स इन्डस्ट्रीजका मालिक तथा एसियाकै धनी मुकेश अम्बानी पैसा, गाडी तथा विभिन्न विलासीका सामानका कारण सधैँ चर्चामा रहन्छन् । अम्बानी घर र सम्पत्तीको कारण मात्र होइन उनको पूरै जीवनको बारेमा नै मानिसहरुमा चासो रहने गर्छ । भने उनको सम्पूर्ण परिवार पनि यसमा सामेल हुने गर्छन् ।
गएको वर्ष विवाह बन्धनमा बाधिँएका उनका छोरा आकाश अम्बानी र उनकी श्रीमतीको विषयमा पनि निकै लामो समयदेखि चर्चा–परिचर्चा चलेको थियो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार मुकेश अम्बानीले आफ्नी बुहारीलाई अनौठो उपहार दिए ।
मुकेश अम्बानीले बुहारीको लागि दुबईबाट सुनको कार उपहार दिएका थिए ।कार सिधै दुबईबाट भारत ल्याइएको थियो । मुकेश अम्बानी पनि कारका सौखिन मानिन्छन् । उनीसँग १७० भन्दा बढी कारको विशाल संग्रह नै छ । दुबईमा सुनको कार बन्नु र बनाउनु कुनै नौलो कुरा भने होइन ।
दुबईका शेख पनि सुनको कारमा नै शयर गर्ने गर्छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार मुकेश अम्बानीले विशेष रुपमामा उक्त कारलाई बिहेमा आफ्नी बुहारी श्लोकलाई दिएका थिए । कारको मुल्य ४१० मिलियन परेको बताइएको थियो ।
हेर्नुहोस सो सम्वन्धि भिडियो